Gmail-ka Android wuxuu wax ka beddelaa isku-xirnaanta badhanka Isku-darka | Androidsis
Adeegga emailka ee Google waa midka ugu dhameystiran uguna hawl badan ee aan hadda ka heli karno adduunka, kaas oo u oggolaaday inuu noqdo ugu isticmaal badan oo leh tirada ugu badan ee isticmaaleyaasha. Ka fog inay is waafajiso booskeeda hoggaamineed, ee Google waxay si joogto ah ugu daraan hawlo cusub.
Laakiin ma aha oo kaliya shaqooyinka cusub, laakiin sidoo kale isbeddel ku samee qaabeynta la qabsato isdhexgalka barnaamijyada kale in uu na siiyo si ay iskula jaan qaadaan. Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee arjigu helay waxaa lagahelay heer qurux, gaar ahaan badhanka Qor.
Badhanka sabeynaya ee ku yaal geeska hoose ee shaashadda ee aan ka heli karno sanduuqa sanduuqa ayaa sanadihii u dambeeyay wakiil looga ahaa a goobaabin gudaha oo aan ka heli karno calaamada +.
Ka dib cusbooneysiintii ugu dambeysay ee horey looga heli jiray Bakhaarka Dukaanka, badhanka wareegsan ee leh + calaamadda gudaha, ayaa loo beddelay lagu metelaa qalin oo uu weheliyo ereyga Samee. Haddii aan dhex galno sanduuqa, wuxuu ku metelaa qalin oo keliya, isaga oo tirtiraya erayga Isku-darka.
Midabka badhankan sabbaynaya sidoo kale wuu isbadalay. In kasta oo astaantii hore muujisay midabbo kala duwan, kan hadda ku jira qaab qalin ayaa loo beddelay in la isticmaalo kaliya midabka cas.
Nooca shabakadda ee Gmail sii muuji calaamada + oo ay weheliso ereyga Samee marka aan rabno abuurno emayl cusub, laakiin waxay u badan tahay in muddo kadib ay ku dhammaan doonto qaadashada matalaad la mid ah nooca Android.
Sidaan kor ku soo sheegay, nuqulkan cusub ee badhanka si loo abuuro emayl cusub, waxaa lagu heli karaa nooca ugu dambeeya ee Gmail horeyba looga heli jiray Play Store, gaar ahaan nooca 2020.05.17.313130477, marka maahan wax cusbooneysiin dhanka serverka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Gmail-ka Android wuxuu wax ka beddelaa isku-xirnaanta badhanka Compose
Sida loo isticmaalo taariikhqorihii shaashadda ee Android 10 iyo waxyaabo kale oo lagu beddelan karo